नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मोबाइल एप सार्वजनिक, के-के छ सुविधा ? | News Polar
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मोबाइल एप सार्वजनिक, के-के छ सुविधा ?
न्यूजपोलार असार ३०, २०७८, बुधबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मोबाइल एप सार्वजनिक भएको छ । आज भएको एक भर्चुअल कार्यक्रममा डेप्टी गभर्नर डा. निलम दुङ्गना तिम्सिनाले उक्त मोबाइल एपको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
उक्त एपबाट बैंकको वेबसाइटमा राखिएका नियमित सूचना, जानकारी, विदेशी विनिमय दर, अध्ययन प्रतिवेदन, तथ्याङ्कलगायतका सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ । मोबाइल एपको प्रयोगबाट बैंकसँग सम्बन्धित सूचना र जानकारीप्रति सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धिमा थप सहयोग पुग्ने बैंकले अपेक्षा राखेको छ ।
उक्त एप हालको निम्ति ‘बेटा भर्सन’ मा उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त हुने सुझावको आधारमा यसलाई थप परिस्कृत गर्दै लगिने जनाएको छ । हाललाई मोबाइल एप एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम रहेको मोबाइलमा उपलब्ध हुने भएको छ । एपलाई क्रमिक रूपमा आइओएस अपरेटिङ सिस्टममा समेत विस्तार गरिने गभर्नर डा. तिम्सिनाले बताउनु भएको छ ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७८, १७:१२:१५
मेगा बैंकद्वारा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहकका परिवारलाई ७ लाख रुपैँया हस्तान्तरण